नेपाल आज | छोरासंग निरकुमारको त्यो अन्तिम भेट
छोरासंग निरकुमारको त्यो अन्तिम भेट
बिहिबार, २६ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
७ अंकलाई लक्की अंक मानिन्छ । त्यसैले अंग्रेजीमा भनिन थालियो– ‘लक्की सेभेन ।’ तर यही उमेरमा हाँसखेल गरिरहेका आशिषको हकमा यो उमेर अनलक्की ठहरियो । यही वयमा समयले उनको जीवनलाई ‘टुहुरो’ मा अनुवाद गर्यो । आशिष आमासंग हाँसखेल गर्दै हुर्किरहेका थिए । साथीभाइसंग स्कुलमा पढिरहेका थिए । छोरालाई पढाउन आमा इन्द्रकला गाउँबाट सदरमुकाम भोजपुर झरेकी थिइन् । बाबु निरकुमार राईले अंगाल्दै आएको राज्यसत्ता विरुद्धको क्रान्ति, सामन्तवाद विरुद्धको लडाईंजस्ता विषय र आशिषको बचपनमा कुनै साइनो थिएन । आखिर घिउ नलाग्ने क्रान्तिले दुई नेपाली दाजुभाइको ज्यान लियो ।
मरेको भोलिपल्ट दुईदिन भने झैं दिन औपचारिकतामा वित्न शुरु भयो । खोइ, एकैछिनको उन्मादले टुहुरा भएका ३ नाबालकको कथा कस्ले लेख्ने ? सिउँदो उजाडिएका ती अवोध महिलाको सामाजिक सुरक्षा कसले हेर्ने ? बृद्ध आमाबाबुका टेक्ने लौरो बनेका काँध विना कारण ढल्दा डाँडापारीका घामको सुरक्षा दायित्व कसले लिने ? माओवादीले बोक्ने क्रान्ति र पुलिसले बोक्ने शान्तिको पेस्तोलले दिने परिणाम भनेको जीवनको विसर्जन नै हो । कुन स्वार्थको खपतका लागि कसैको इमान्दार प्रयाश देखिदैन् । दुई तिहाईको सरकार चलाउने कम्युनिष्ट । कम्युनिष्ट सरकारलाई शत्रु ठानेर त्यस विरुद्ध बन्दुक उठाउने पनि कम्युनिष्ट । आखिर कुन रसायनका कारण यस्तो अन्तरविरोधको भाइरसले राजनीति बिटुलिँदैछ ?
इन्द्रमायाले तत्काल कार्यक्षेत्रमा जान भनिन । तर निरकुमारले ढाड्स दिँदै भनेका थिए– ‘मलाई केही हुन्न । यदि मरियो भने पनि देशका लागि मर्ने हो ।’ इन्द्रमायाले भनिन– ‘अनि छोराको भविष्य चाहिँ ?’ निरकुमारले ढाड्स दिए– ‘चिन्ता गर्नै पर्दैन् ।’ कहिलेको गाली, कहिलेको बोली भनेजस्तै भयो । त्यसो भनेको केही समयपछि गाइँगाइँ गुइँगुइँ चल्न थाल्यो । इन्द्रकला भीड भएतिर दौडिइन् । दुईवटा शव रक्तमुछेल अवस्थामा थिए ।
इन्द्रमायाको अन्तिम इच्छा छ, सिउँदोमाथि खेलबाड बन्द होस् । यो क्रमको निकास खोजिएन भने समस्या समाधानको चुरो फेला पार्न कठिन पर्नेछ । उनी भन्छिन– ‘प्रतिबन्ध लगाएर नभई सरकारले समस्याको समाधान खोजोस् । मेरो जस्तो नियति अरु दिदीबहिनी भोग्न नपरोस् ।’